ANC Visit A Confirmation That There Is Crisis In Zimbabwe: Chamisa – ZimEye
ANC Visit A Confirmation That There Is Crisis In Zimbabwe: Chamisa
Opposition MDC Alliance President Nelson Chamisa has differed with the ANC leadership who met Zanu PF yesterday arguing that the mere fact that they were here in Zimbabwe and not Mozambique, Namibia or Zambia was a confirmation that there is a crisis.
Posting on social media, Chamisa thanked the ANC for what he termed frank and principled engagement adding that Zimbabwe is burning due to failure by Zanu PF to respect human rights, fundamental freedoms and will of the people.
“Thank you ANC for a frank and principled engagement!Any liberation history or relationship that negates human rights, people’s fundamental freedoms, holding of credible elections and respecting of the WILL of the people is hollow & counter-revolutionary.Zimbabwe is burning! That the ANC has had to visit and be in Zimbabwe and not Namibia or Zambia or Mozambique or any other country in the region is a confirmation that there is a crisis in Zimbabwe and that ZimbabweanLivesMatter,” said Chamisa.
An ANC delegation headed by Secretary General Ace Magashule visited Zimbabwe and met with Zanu PF leaders yesterday.
After the meeting, Magashule said there was no crisis in Zimbabwe but challenges, remarks that Chamisa countered by saying the fact that they had to come meant that there was a problem.